प्रकटीकरण - मौसम विज्ञान नेटवर्क | वेब मौसम विज्ञान (पृष्ठ २)
यस लेखमा हामी तपाइँलाई Storm Glass बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं र यसले कसरी आँधीबेहरीको भविष्यवाणी गर्न सक्छ। यहाँ थप जान्नुहोस्।
हामी तपाईलाई विस्तृत रूपमा बताउँछौं कि समुद्री स्ट्याक के हो र यो कसरी गठन हुन्छ। यहाँ यी भौगोलिक संरचनाहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो शहर र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सूची देखाउँछौं। यसको बारेमा यहाँ थप जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई एशियाका समुद्रहरू र तिनीहरूका विशेषताहरू बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा विस्तारमा बताउँछौं। यसको बारेमा यहाँ थप जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई बत्ती र यसको विशेषताहरू बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यसको बारेमा यहाँ थप जान्नुहोस्।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश कुन हो
यस लेखमा हामी तपाईलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो देश कुन हो र आकारमा पछ्याउने देशहरू कुन हो भनेर बताउँछौं।
हामी तपाइँलाई जेनल नदी, यसको स्रोत र विशेषताहरु को बारे मा जान्न को लागी सबै कुरा बताउँछौं। यसको बारेमा यहाँ जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई veroño के हो र यसको विशेषताहरु के हो को बारे मा जान्न को लागी आवश्यक सबै कुराको व्याख्या गर्दछौं।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई बेथलहेम को तारा र यसको सम्भावित मूल को बारे मा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यसको बारेमा यहाँ जान्नुहोस्।
वसन्त के हो?
हामी तपाइँलाई सबै कुरा बताउँछौं जुन तपाइँलाई वसन्त के हो, यसको विशेषताहरू र उनीहरूको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई हिउँ हिमपहिरो र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईलाई गंगा नदी र यसको विशेषताहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्
यस लेखमा हामी तपाईलाई ग्रीनविच मेरिडियन र यसको लागि के हो भनेर जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईलाई पेरिटो मोरेनो ग्लेशियरको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँदछौं, विश्वमा आश्चर्यजनक चीजहरू मध्ये एक। यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
युरोपको सबैभन्दा लामो नदी
हामी तपाईंलाई युरोपमा सब भन्दा लामो नदी र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँदछौं, यहाँ यसको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई मध्ययुगको क्यालेन्डर र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ इतिहास को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
हामी ब्लेस पास्कलको सबै ईतिहास, जीवनी र अद्भुत वर्णन गर्दछौं। यस गणितज्ञको गहन जीवनको बारेमा थप जान्नुहोस्।
सुएज नहरको महत्व, विशेषता र इतिहासका बारे जान्नुहोस्। हामी यहाँ सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताउँछौं।
हामी तपाइँलाई पनामा नहरको महत्व र यसको इतिहास बारे बताउँछौं। यस ईन्जिनियरिंग कार्यको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
हामी तपाइँलाई बियरिंग स्ट्रेट र यसको जिज्ञासाको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
सानो बरफ युग
हामी तपाईंलाई सानो हिमयुग र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा भन्छौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
फुकुशिमा दुर्घटना भएको १० बर्ष पछि
हामी तपाईंलाई मार्च ११, २०११ को फुकुशिमा आणविक दुर्घटनाको बारेमा खबर दिन्छौं। स्थिति कस्तो छ?
एक मौसमविज्ञ कसरी हुन्छ
हामी तपाईंलाई मेटेरियोलोजिष्ट कसरी हुन जान्नको लागि जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। जान्नुहोस् कि तपाईंले के अध्ययन गर्नु पर्छ र कति पैसा कमाउनुहुनेछ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई म्यासवेलको समीकरणहरू, उनीहरूका विशेषताहरू र महत्त्वको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं।
हामी तपाईंलाई खगोलीय घडी र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यस उपकरणको बारेमा यहाँ जान्नुहोस्।
जारागोजानो क्यालेन्डर र यसको इतिहासको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै हामी तपाईंलाई बताउँदछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी क्लाउडियो टोलेमीको सम्पूर्ण जीवनी विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं। यस वैज्ञानिक र तिनका ठूला योगदानहरूका बारे बढि जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई उत्तरी सागरको सबै सुविधाहरू, जैवविविधता, गठन र खतराहरू बताउँछौं। यस समुन्द्रको बारेमा यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई २१ औं शताब्दीका सब भन्दा उज्जवल मनको सम्पूर्ण जीवनी बताउँछौं, स्टीफन हकिking। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
कोरल सागर र यसको विशेषताहरूका बारे तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा हामी तपाईलाई बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई अलास्काको खाडी र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई जाभा सागर र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको रहस्यहरु को बारे मा जान्नुहोस्।
फाटा मोर्गाना प्रभाव
हामी फाटा मोर्गाना प्रभाव के हो र यो कसरी हुन्छ भनेर जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा हामी तपाईंलाई बताउँछौं। यहाँ भ्रम प्रभाव को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई पर्सियाली खाडी, यसको विशेषताहरू र आर्थिक महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं।
हामी तपाईंलाई प्रत्येक कुरा बताउँछौं कि तपाईंलाई जियडेटिक पोइन्ट के हो, यसको विशेषताहरू र महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ।
स्पेनको हाइड्रोग्राफिक बेसिनहरू
हामी तपाईंलाई स्पेनको हाइड्रोग्राफिक बेसिनहरू र उनीहरूको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा भन्छौं। हाम्रो नदीहरूको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई एड्रियाटिक सागर र यसको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा भन्छौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई बाल्टिक सागरको सबै सुविधाहरू, वनस्पति, जीवजन्तु र अर्थव्यवस्था बताउनेछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई सबै कारणहरू बताउँछौं किन अल्बोरन सागर यति धेरै परिचित र महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ यसको बारेमा जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई हिन्द महासागर र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा सिकाउँदछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई प्रशान्त महासागर र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा सिकाउनेछौं। यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई प्रख्यात राईन नदीको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउनेछौं। युरोपियन नदीको बारेमा यहाँ थप जान्नुहोस्।
यो लेखमा हामी तपाईलाई सबै विशेषताहरु, मौसम, वनस्पतिहरु र सेगुरा नदीको जीव जन्तुहरु स्पेनको सबैभन्दा प्रतीकात्मक एक हो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई देखाउँदछौं जुन संसारमा सब भन्दा राम्रो सनसेटहरू हुन् र तिनीहरूलाई कसरी रमाइलो गर्ने।
हामी तपाईंलाई एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजमको शिक्षा र यसको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यो लेखमा हामी तपाईंलाई शरद theतु को मुख्य विशेषताहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। बर्षको यस मौसमको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई Aswan बाँध को विशेषताहरु र उत्पत्ति के के देखाउँनेछ। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी उत्तम सनराइजहरूको सूची बनाउँदछौं र जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यी परिदृश्यहरु को जादू को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
केप गुड होप
यस लेखमा हामी तपाइँलाई केप गुड होपमा हेर्नुपर्ने सबै कुरा देखाउछौं। यस सुन्दर ठाउँको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं जुन म्याड्रिडका मुख्य जलाशयहरू छन् र जुन सूचीमा सुरक्षित छन्। यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई रोजालिन्द फ्रान्कलीनको सम्पूर्ण जीवनी र उनले विज्ञानको विश्वमा गरेको योगदानको बारेमा बताउनेछौं।
यस लेखमा हामी तपाईलाई प्रकाशको विघटनको अपरेशनको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा वर्णन गर्छौं। यस घटनाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई शंकुधारी समूहको सबै सुविधाहरू, आवास र मुख्य प्रजातिहरू बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई अमेजनको जीव र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। जान्नुहोस् प्रभावले जनावरलाई कस्तो असर पार्छ बारे अधिक जान्नुहोस्।
नाजरको छालहरू कसरी गठन हुन्छन् र त्यसका विशेषताहरू के हुन् भनेर विस्तृत रूपमा जान्नुहोस्। हामी यहाँ सबै कुरा विस्तारपूर्वक बताउँछौं।
कोर्टेज को समुद्र
यस लेखमा हामी तपाईंलाई कर्टेजको समुद्रको सबै सुविधाहरू, गठन र जैव विविधता बताउनेछौं। यस स्वर्गीय समुद्रको बारेमा सबै कुरा जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई स्पेनमा रहेको जलाशयहरूको सबै विशेषताहरू र यसले कसरी खडेरीको सामना गर्ने बताउनेछौं। यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईलाई सन्यान्डलको सबै विशेषताहरु र ईतिहासको बारेमा बताउछौं। कसरी बनाउने र कसरी यसले काम गर्दछ सिक्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई निकोियाको हिप्परकसको प्रख्यात जीवनी र विज्ञानको विश्वमा उनको मुख्य योगदान बताउनेछौं।
यस लेखमा तपाईंले भूमध्यसागरको बारेमा चाहिने सबै जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
चंद्र नयाँ वर्ष
हामी तपाइँलाई नयाँ सालको सबै रहस्य र जिज्ञासाहरू बताउँछौं। चिनियाँ नयाँ वर्ष र यसको विशेषताहरूको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई ऐतिहासिक कार्टोग्राफीका विशेषताहरू के हुन्छ र भूगोलको विकासमा यसको कस्तो महत्त्व रहेको छ भनेर बताउनेछौं।
हामी तपाईंलाई GIS के हो र आज यसको महत्त्व देखाउँदछौं। परियोजनाहरुमा भौगोलिक सूचना प्रणाली र अनुप्रयोग को बारे मा जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई बेन्जामिन फ्रान्कलीनको सम्पूर्ण जीवनी, उनको कारनामहरू र महत्वाकांक्षा बताउनेछौं। एक राम्रा ज्ञात व्यक्तिहरूको बारेमा सबै सिक्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई अरल समुद्री किन र तपाईंलाई सुख्खा बनाउन के भयो भनेर जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई हर्कुलसको स्तम्भहरूको सुरुवात र पौराणिक कथाको बारेमा बताउँछौं। हर्कुलसको ईतिहासको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई पृथ्वीमा बिभिन्न समय क्षेत्रहरू के हुन् र ती कसरी गणना गरिन्छ भनेर देखाउँदछौं। यहाँ समय परिवर्तन को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी टेफोनोमी भनेको के हो र जीवाश्महरूको अध्ययनमा यसको महत्त्वबारे वर्णन गर्छौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई निर्देशांक नक्शा के हो भन्ने देखाउँदछौं, यससँग कस्तो तत्वहरू छन् र यो कसरी व्याख्या गरिन्छ। आधारभूत भूगोलको बारेमा यहाँ जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि प्लान्क्टन के हो, यो के बनेको हुन्छ, यसको विशेषताहरू र महत्त्व। फूड चेनको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
तपाइँलाई क्विकस्यान्ड र यसबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भनेर जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा हामी वर्णन गर्छौं। चलचित्रहरूमा यो लगातार घटनाको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई फायर टर्नेडोको उत्पत्ति के हो बताउँछ र यसले के नुकसान गर्दछ। यहाँ यी चरम घटनाहरु को बारे मा जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई अमेजन नदीका विशेषताहरू, गठन र जियोलोजी के हो बताउँछौं। संसारको सबैभन्दा ठूलो नदीको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई लोच नेसको सबै रहस्य र विशेषताहरू बताउँछौं। पौराणिक घर रहेको तालको बारेमा बढी जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यस पोस्टमा हामी तपाईंलाई नाइजर नदीका सबै सुविधाहरू, गठन, वनस्पति, जीवजन्तु र खतराहरू बताउँछौं। यस अफ्रीकी नदीको बारेमा यहाँ अधिक जान्नुहोस्।
यस पोष्टमा तपाईं सरगासो समुद्रको बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित यो जिज्ञासु समुद्रको बारेमा थप जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई बेरेन्ट सागरका विशेषताहरू र यसको आर्थिक र जैविक विविधता महत्त्व देखाउँदछौं। यहाँ यसको बारेमा जान्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई मार्माराको समुद्रको बारेमा जान्न सक्ने सबै कुरा सिकाउँदछौं। सबै सुविधाहरू, टापुहरू र पर्यटन स्थानहरू। यहाँ सबै जान्नुहोस्।
Hypatia को जीवनी
यस लेखमा तपाई हाइपाटियाको जीवन, कर्म र मृत्युको बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यस गणितज्ञ र दार्शनिकको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
यो लेखमा हामी तपाईलाई कालो समुद्रको बारेमा जान्नु पर्ने सबै चीजहरू भेट्टाउनेछौं। यस समुद्री र यसमा भएका विशेष गुणहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई पायथागोरसको जीवनी र शोषण देखाउनेछौं, एक महत्त्वपूर्ण गणितज्ञ र दार्शनिक। भित्र आउनुहोस् र यसको बारेमा जान्नुहोस्।
भौतिकशास्त्री आइज्याक न्यूटनले विज्ञानलाई असंख्य योगदान दिए र सबै खोजहरुमा क्रान्ति ल्याए। उनको जीवनी को बारे मा जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अल-ख्वारिज्मी एक बहुसांस्कृतिक वैज्ञानिक थिए जो गणित, खगोल विज्ञान र भूगोलमा कुशल थिए। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र विज्ञानमा धेरै योगदानहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
स्पेनमा सब भन्दा उच्च शहर
यस लेखमा हामी तपाईंलाई स्पेनको सब भन्दा माथिल्लो शहरहरूको शीर्ष १० देखाउँदछौं। स्पेनमा सब भन्दा उच्च शहर र यसको विशेषताहरू थाहा पाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पेट्रिकर, वर्षाको विशेषता र रमणीय गन्धको बारेमा सबै जान्नुहोस्। हामी यसको मूल वर्णन गर्दछौं किन किन यो गन्ध आउँछ। प्रवेश!
ज्वारहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन् भनेर हामी व्याख्या गर्दछौं। तपाईं टाइड टेबल र माछा मार्ने महत्त्वको बारेमा सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ। भित्र आउनुहोस् र सबै कुरा सिक्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई माछा र भ्यागुताहरूको वर्षाको बारेमा सबै रहस्यहरू बताउँछौं। यो एक अजीब घटना हो जसको बारेमा थोरै ज्ञात छ। भित्र आउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्रामीण क्षेत्रमा लकड़ी र कोइला स्टोभको वातावरणीय प्रभाव
काठ र चारकोल स्टोभको प्रयोगले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा व्यापक वातावरणीय प्रभाव निम्त्याउँछ। यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
रोबर्ट हूक एक वैज्ञानिक र विज्ञानको विश्वको लागि ठूलो महत्त्वका दार्शनिक थिए। यहाँ उसका आविष्कारको महत्व पत्ता लगाउनुहोस्।
वाइफाइ थर्मोस्टेट तताउने संसारमा एक क्रान्ति हो। यहाँ यस उपकरणको सबै अपरेशन गहिराइमा जान्नुहोस्।
सान मिगुएल को गर्मी स्पेन मा सेप्टेम्बर को अन्त मा लगभग हरेक वर्ष लाग्छ। के तपाई यसको विशेषताहरु जान्न चाहानुहुन्छ?
यस पोष्टले पानीको थोपा कसरी र कसरी आकार लिने बारे कुरा गर्दछ। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
यस पोष्टले वर्षा अनुप्रयोग अलार्म चेतावनीको लागि अवस्थित भएका विभिन्न अनुप्रयोगहरूको बारेमा कुरा गर्दछ। तिनीहरुसँग तपाईले जहिले पनि थाहा पाउँन सक्नुहुन्छ कि कहिले र कहाँ पानी पर्ने हो।
यो पोष्टले सुक्खा बरफको गुण र प्रयोगको बारेमा कुरा गर्छ। यदि तपाईं यसको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ र घरमा यो कसरी गर्ने सिक्नुहोस् भने, यो तपाईंको पोष्ट हो।
यस पोष्टले फेब्रुअरी २ मा मनाउने वर्ल्ड वेटल्याण्ड्स डेमा भिजेको भूमिको बारेमा कुरा गर्छ। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
यस पोष्टले गल्फको विशेषता र परिभाषाको बारेमा, बे र कोभ र संसारमा मुख्य खाडीहरु बीचको भिन्नता बारे कुरा गर्छ। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ?
फिलिपिन्सको मेयन ज्वालामुखी फुट्नेछ
यस पोष्टले फिलिपिन्समा मेयन ज्वालामुखीले भइरहेको ज्वालामुखी गतिविधि र त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्ने बताएको छ।
मौसम परिवर्तनको प्रभावहरु बारे जागरूकता जगाउने भिडियो
एक समुद्री विरासत टोलीले एक ध्रुवीय भालुको जीवनको अन्तिम मिनेट रेकर्ड गरेको छ, जुन जलवायु परिवर्तनको नयाँ शिकार हो। भित्र आउनुहोस् र हामी तपाइँलाई किन त्यसो भन्न सक्छौं।
बाली ज्वालामुखी फुट्न लागेको छ
माउन्ट अगुमा बाली ज्वालामुखी छ र यो ठूलो विस्फोटको छेउमा हुन सक्छ। के तपाई बाली ज्वालामुखी र यसको इतिहास को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
समुद्री सतह बृद्धि को एक अन्तर्क्रियात्मक नक्शा बनाउनुहोस्
यदि समुद्र सतह बढ्यो भने विश्व कस्तो हुने थियो? अब तपाई पनी अन्तरक्रियात्मक नक्साका साथ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि पग्लनले कसरी यसले असर पार्दछ।
युरोप रेडियोएक्टिव रुथेनियम १०106 क्लाउड प्राप्त गर्दछ
एक रेडियोधर्मी रुथेनियम १०106 क्लाउड एक महिना भन्दा बढी युरोपमा रहेको छ। आईआरएसएन अनुसन्धानले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई इन्कार गर्दछ।
ठूला डाटा अनुप्रयोगहरू पानी व्यवस्थापन पहुँच गर्दै छन्। सिंचाईको बचत र उत्तम व्यवस्थापन भविष्यको लागि ठूलो उम्मेदवारको रूपमा पोष्ट गरिएको छ।
अन्टार्कटिक ज्वालामुखीको प्रभाव भत्किरहेछ
अन्टार्कटिक महाद्वीपमा धेरै ज्वालामुखीहरू देखा पर्‍यो भने हालका अध्ययनहरूका लागि हामी विनाशकारी नतिजाको बारेमा व्याख्या गर्छौं।
किन यो स्पष्ट रातमा चिसो छ?
बादलले दिनको समयमा वा रातमा देखा पर्दछमा निर्भर तापक्रममा डबल प्रभाव पार्दछ। हामी व्याख्या गर्दछौं किन यो घटना हुन्छ
हामी व्याख्या गर्दछौं किन यो शून्य हुँदा थर्मल सेन्सेशन बढ्छ र त्यो एक संवेदना हुनबाट टाढा रहन्छ यो वास्तविक प्रभाव हो जुन ऊर्जाको कारण रिलीज हुन्छ।
ESA ले मंगलवार को उपनिवेशका लागि अन्य संगठनहरु संग दर्जनौं वैज्ञानिकहरु संग दर्जनौं वैज्ञानिकहरु संग ल्यान्जारोट प्रयोगहरु मा अर्को दिन बाहिर लेनेछ
रहस्यमय ब्रोकन स्पेक्ट्रम, जिज्ञासु ऑप्टिकल घटना
ब्रोकन स्पेक्ट्रमको अप्टिकल घटनाको विवरण, साथै यसको उत्पत्ति र किन यो देखिन्छ र यसको खासियतको विवरण।
ओरियनिड उल्का वर्षा, बर्षको सबैभन्दा सुन्दर
ओरियनिड उल्का शावरको समीक्षा। उत्पत्ति, विवरण र कहाँ हेर्ने र यसको लागि उत्तम सर्तहरूको बारेमा वर्णन।
आणविक जाडो भनेको के हो?
आणविक जाडो भनेको के हो भन्ने बारे व्याख्या, कसरी यो कसरी हुन्छ त्यहाँ देखि, साथै यसले प्रजातिको जीवनमा पार्ने असरहरू
"परीक्षण शहर" जुन म Mars्गलबारका लागि लामो प्रतीक्षा गरिएको शहरको नक्कल गर्दछ
मंगलबार सबैको आँखाको ग्लोबल फोकस भयो यसको अपेक्षित आगामी उपनिवेशको कारण। अब दुबई आफ्नो नयाँ परियोजना को लागी अलग छ।
सुत्ने पर्यवेक्षण कम्पनी फ्लेग्रेइ अपेक्षित खतरनाक हुन सक्छ
भर्खरको अनुसन्धानले संकेत गरे कि क्याम्पी फ्लेग्रेई सुरुमा अपेक्षित भन्दा बढी खतरनाक हुन सक्छ। यस पटक म्याग्मा अर्को ठाउँमा जाँदैछ
सेप्टेम्बर २०१ of को महान प्राकृतिक प्रकोपहरू। विश्वभरि भइरहेका सब भन्दा बढि घटनाहरूका संकलन।
जान्नुहोस् कसरी पृथ्वीमा जीवन उत्पन्न भयो र यो कसरी पुरानो ऐनको बखत विकसित भयो। एक सब भन्दा चाखलाइ भौगोलिक समय
बायोल्युमेनेसेन्स भनेको प्रकाश हो जुन केहि जीवहरू रातमा उत्सर्जन हुन्छन्, ती मध्ये केही आन्दोलनद्वारा, र अरूहरू सड्नबाट। हामी केहि व्याख्या गर्दछौं
सूर्य पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र हिट
पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र सेप्टेम्बर को सम्पूर्ण महीना मा मारिएको छ। पछिल्लो दशकको सब भन्दा बलियो सौर फ्लेरसको साथ।
के तपाईंलाई वर्षाको सबै प्रकारहरू थाहा छ? किनभने यदि तपाईं अनौंठो वर्षाको घटनाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई अवस्थित केही अति atical र डरलाग्दो बताउँछौं
हामी तपाईंलाई एउटा अविश्वसनीय भिडियो देखाउँदछौं, जसमा तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी आँधीबेहरीले हावामा पार्दछ आश्चर्यचकित मौसमविद्को शरीरमा कसरी प्रभाव पार्छ।
मेक्सिको अझै अर्को ठूलो भूकम्पको साथ हल्लाउँदै छ
मेक्सिकोमा हिजो नयाँ .6,1.१ परिमाणको भूकम्प गयो। भूकम्पको छालले सेप्टेम्बरमा देशलाई असर गरिरहेको छ जस्तो देखिदैन
ज्वालामुखी विस्फोटहरूमा किन बिजुली देखा पर्छ?
किन धेरै ज्वालामुखीहरु को विस्फोट मा बिजुली छ को व्याख्या। कारणको वर्णन कि यो घटना आँधीबेहरीमा विशेष छैन
दारजाको कुवा। नरकको ढोका
प्राकृतिक र मानव ईतिहासको व्याख्या, जसले आगोको महान क्रेटरको कारणले कसैलाई थाहा नपाई जलायो जब यो कहिले जान्छ।
गिजरहरूको बारेमा कुरा गरौं
गेजरहरू, वा के उही छ, फसेको भूजल जुन उनीहरूले भोग्ने तापक्रमबाट उत्पन्न हुन्छ। हामी तिनीहरूको बारेमा सबै कुरा बताउँछौं
मरुभूमिमा बढ्ने हो? यो एक पागल विचार होईन, यो केहि हो जुन पहिले नै भइरहेको छ
हामी यो मरुभूमिमा उब्जाउने तरिकाहरू र कुन तरिकामा विभिन्न परियोजनाहरू वर्षौंदेखि सुरू गरिसकिएको छ जुन पहिले नै वास्तविक हो भनेर वर्णन गर्दछौं।
मौसमले रोमन साम्राज्यको पतनमा निर्णायकको भूमिका खेलेको थियो
हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कसरी हिउँदको चिसोले विगतका सभ्यताहरूमा ठूलो प्रतिनिधित्व गर्‍यो जसले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्‍यो र सभ्यताको विकास भयो
भूकम्पको बेला मेक्सिकोमा कुन बत्तीहरू देखियो?
मेक्सिकोमा भूकम्पको दौडान भएको अनौठो ल्युमिनेसेन्ट घटनाले थुप्रै मानिसलाई चकित पारेको छ। हामी तिमीलाई भन्दछौं किन यो भएको छ
मेक्सिकोको चियापासको तटमा भूकम्प गएको छ। यो area.२ परिमाणको रिश्टर स्केलमा यो त्यस क्षेत्रमा रेकर्ड गरिएको थियो।
पृथ्वीमा ठूलो क्षुद्रग्रह खस्दा के हुन्छ?
हाम्रो ग्रहको विरुद्ध उल्का पिण्डको नतिजा घातक हुन्छ। हामी तपाईंलाई के हुनेछ भनेर बताउँछौं, फिल्महरू वा अनुमानहरू पछाडि।
अमेजनमा डेनमार्कको आकार खानीका लागि लिलामी गरियो
ब्राजिल को वर्तमान सरकार द्वारा एक कोशिश को आदेश, डेनमार्क को आकार अमेजन वर्षावन को एक क्षेत्र को खनन खोजे
हादिक ईनको विवरण, कसरी पृथ्वीको गठन भयो, अवस्थितिहरू कसरी अस्तित्वमा थिए, कसरी ग्रह इशारा गरिएको थियो र कसरी जीवनले आफ्नो बाटो बनाउन शुरू गर्यो।
चीनको अरबपतिले यसको पानी सफा गर्ने योजना!
यसको पानीको लागि खाद्य र उर्जा सुरक्षाको सम्झौता भविष्यसँग सामना गर्दै, चीनले आफ्नो अत्यधिक प्रदूषित पानीलाई सुधार गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
ग्रह वरपर वातावरणीय प्रदूषण असुरक्षित स्तरमा पुग्छ
स्वास्थ्यमा छोटो देखि लामो अवधिसम्म प्रदूषणका प्रभावहरू र यसले बच्चाहरू र गर्भवती महिलाहरूमा पार्ने प्रभावहरूबारे अध्ययन गर्दछ।
ब्यूफोर्ट स्केलले विगत २०० बर्षमा समुद्र र भूमिमा बतासको तीव्रताका लागि परिमाणको रूपमा सेवा गरेको छ। उत्पत्ति, इतिहास र विवरणहरू
निलो रंगमा कुँदिएका कुकुरहरू हालका दिनमा भारतमा देखा पर्दैछन्। यसबाट ग्रस्त प्रदूषणको प्रभावहरू चिन्ताजनक मात्रै होइन।
"त्यहाँ केहि छिटो" मौसम परिवर्तन मा एक सिफारिश पढ्न
उपन्यास भूत र भविष्यका घटनाहरूमा वैज्ञानिक डेटाको एक ठूलो संकलनमा आधारित छ, जसले हामीलाई भविष्यले युरोपमा मौसमले ध्वस्त पारेको छ।
यलोस्टोन सुपरभर्कोको सतह लुप्त भइरहेको छ!
संयुक्त राज्य भूगर्भीय सर्वेक्षणद्वारा जारी गरिएको नक्शाले देखाउँदछ कि भर्खरको भूकम्पको कारण सुपरिभोलकनको सतह कसरी विकृत हुन थाल्छ।
यदि तापक्रम बढ्यो भने ... किन ग्रह चिसो छैन?
तापक्रममा भएको निरन्तर वृद्धिको कारण केही वैज्ञानिकहरूले उद्देश्यका साथ यस ग्रहलाई शान्त पार्न उपायहरू प्रस्ताव गरे।
मुख्य प्राविधिक मतभेदहरू, जबकि तिनीहरू सामान्य रूपमा तिनीहरू के ल्याउँदछन्, र कसरी आइसोबार नक्शामा तिनीहरूलाई पहिचान गर्न सिक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित छन्।
किन जनावरहरू भूकम्पको अनुमान गर्न सक्छन्?
विभिन्न तरिकाहरूमा जनावरहरूसँग भूकम्पको अनुमान गर्न "छैठौं इन्द्रिय" छ। यस तरिकाले, तिनीहरू समयमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्।
प्रभावशाली जायन्ट जेट्स भर्खरै हवाईमा दर्ता गरियो
लाइटनिंग गोब्लिन्स पनि भनिने विशाल जाटहरू, निलो जेट्स र स्प्रिट्स मध्ये एक हुन्, हेर्नको लागि एउटा अनौंठो घटना हो। विशेष गरी राक्षसहरू!
अगस्त २१ मा त्यहाँ कुल सौर्य ग्रहण हुनेछ, हामी तपाईंलाई वास्तविक समयमा कसरी हेर्ने भनेर बताउँछौं!
स्थानहरू जहाँबाट ग्रहण राम्रो देखिन्छ, वेबसाइटहरू जुन वास्तविक समयमा प्रसारण गर्दछ, र विभिन्न सूर्य ग्रहणको विवरण।
तपाईंलाई थाँहा थियो…? जिज्ञासा जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा हाम्रो ग्रहको बारेमा थाहा थिएन!
जिज्ञासाहरूको चयन जुन तपाईंलाई हाम्रो ग्रहको बारेमा थाहा छैन! जस मध्ये केहि अहिले भइरहेको छ!
अक्सिजनको कमी अक्सर सहसम्बन्धित गरिएको छ किनकि हामी दुष्टको स्तर भन्दा माथि जान्छौं। तर यो त्यस्तो होइन। तिमिलाई थाहा छ किन?
समय र ठाउँ पछाडि। एक सभ्यताको प्रगति भएपछि यसले आफ्नै आकाशगंगा, ब्रह्माण्डलाई उपनिवेश गर्न सक्दछ र आफु भन्दा टाढा बस्न सक्छ।
नासाले एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्ताव गर्‍यो ... उल्का उल्का पिण्डहरू!
तिनीहरूले एक अन्तरिक्षयानको प्रभावका असरहरू विश्लेषण गर्नेछन् २१,21.600०० किलोमिटर प्रति घन्टाको क्षुद्रग्रह डिडिमोसको बिरूद्धमा कि यसलाई यसको पथबाट कसरी विचलित हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो गर्जन र माराकाइबोको रेकर्ड
माराकाइबो, भेनेजुएला समुद्री जसले बिजुली तूफानका लागि गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड राख्छ। लगभग 300०० आँधीबेहरी त्यहाँ प्रति वर्ष गिर!
वाटरस्पउट्स, त्यहाँको सबै भन्दा धेरै भव्य तूफान हो
सबै भन्दा मनमोहक जलस्रोतहरूको भिडियोहरू र फोटोग्राफहरू। घटनाको स्पष्टीकरण, र जहाँ तिनीहरू प्राय: प्रायः देखा पर्छन्।
आज रात एजियन सागरमा .6,4..XNUMX परिमाणको भूकम्पले ग्रीसको टापु कोसलाई हल्लायो र टर्कीको तटबाट मिनेट्सनामी निम्त्यायो।
सौर तूफानको वास्तविक सम्भावित जोखिमहरू
सौर तूफान पृथक घटना होइन, तर ठूलो सौर तूफानका लागि ... हाम्रो सभ्यतामा यसको नतिजा के हुन्छ?
बृहस्पति र यसको सुपर तूफान! जुनोले हामीलाई यस हप्ता ल्याउँछ, मितिमा सबै भन्दा राम्रो छविहरू र भिडियोहरू!
जुनू स्पेस प्रोब्स द्वारा ब्यबहारको पहिलो छविहरू, बृहस्पतिमा यसको आगमनमा। उच्च रिजोलुसन भिडियोहरू र ग्रेट रेड स्पटको विवरणहरू।
बिग डाटा र मौसम पूर्वानुमानमा भविष्य
के बिग डाटाले हामीलाई धम्की दिने जलवायु घटनाको बिरूद्ध लड्न सक्षम हुनेछ? उत्तर हो हो, र यो पहिले नै छ। यहाँ हामी तपाइँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन्।
ह्याम्बर्गमा जी २० को बाह्रौं बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ स्थान र शहरमा भोगेका तनावद्वारा चिन्ह लगाइएको छ।
विभिन्न कारकहरूको विवरण जसले असर र रूखहरूलाई निश्चित उचाइबाट अब बढ्नको लागि गर्दैन। वन सीमा।
साइबेरियामा फिल्म गरिएको वास्तविक भिडियोको साथ असामान्य ग्लोबुलर किरणहरूको विवरण, र किन यो अनौंठो घटनाको विवरण।
मंगल ग्रहको टेराफॉर्मि।
मंगल ग्रहलाई औपनिवेशिक बनाउन सुरु गर्न एउटा प्रशंसनीय प्रस्तावको वर्णन। सबैभन्दा महत्वाकांक्षी उपनिवेश परियोजनाहरू मध्ये एक।
अन्तिम बरफ युग कसरी भयो इतिहास र मानिस अमेरिका कसरी पुग्न सफल भयो भन्ने बुझ्नको लागि महत्वपूर्ण
के तपाईंलाई थाहा छैन जैव क्षेत्र भनेको के हो? पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी पृथ्वीको सतहको सम्पूर्ण ग्यास, ठोस र तरल क्षेत्र जुन जीवित प्राणीहरूले ओगटेका छन्।
वायुमण्डलका la तहहरू जुन पृथ्वीलाई चारैतिर घेरेर राख्छन्: ट्रोपोस्फियर, स्ट्र्याटोस्फियर, मेसोफियर, थर्मोफेयर र एक्सोस्फीयर। प्रत्येक को लागी के हो?
'बरफ पछि', एप्लिकेसनले देखाउँदछ कि विश्व पग्लन पछि कसरी हुनेछ
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ विश्व ग्लोब वार्मिंगको पग्लिए पछि विश्व कसरी हुन सक्छ? अब तपाईं सक्नुहुन्छ। प्रवेश गर्दछ।
तापक्रम एक महत्त्वपूर्ण मौसमविवात्मक चर हो र यो विश्वभर प्रयोग गरिन्छ। तपाईंलाई तापमानको बारेमा के जान्नु आवश्यक पर्दछ?
हामीले कहिले चंद्र, सूर्य र पृथ्वीलाई अक्षरमा लेख्नु पर्छ?
यस्तो समय हुन्छ जब शिक्षकहरूले गलत हिज्जे लिने विचार गर्छन् र अन्यले गर्दैनन्। हामीले कहिले पूंजीकरण गर्नुपर्दछ र किन?
नासाले एउटा आश्चर्यजनक खोजी गरेको छ: यसले एक सौर प्रणाली भेट्टाएको छ जसमा सात ग्रहहरु छन् जसले जीवनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
नासाले हवाईको ज्वालामुखीहरूको अध्ययन गर्न एउटा अभियान सुरू गरेको छ, जसले मानिस फुट्न सक्ने भएमा सुरक्षाको लागि कडा कदम चाल्ने अनुमति दिनेछ।
२ फेब्रुअरी, जनावर र बोटबिरुवाको अस्तित्वको लागि महत्वपूर्ण यी ईकोसिस्टमलाई रक्षा गर्न वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाइन्छ।
ट्रम्पले EPA को जलवायु परिवर्तन पृष्ठ बन्द गर्न आदेश दिए
ट्रम्प प्रशासनले वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीलाई आफ्नो वेबसाइटबाट मौसम परिवर्तन पृष्ठ हटाउन आग्रह गरेको छ
नक्साले हामीले सास फेर्ने प्रदूषित हावालाई देखाउँदछ
एयरभिजुअल पोर्टलले एक अन्तरक्रियात्मक थ्रीडी नक्शा विकसित गरेको छ जुन विश्वमा प्रदूषणको स्तरहरू देखाउँदै छ।
हिउँ फ्लेक्स, तिनीहरू कसरी गठन हुन्छन् र तिनीहरूको प्रकारहरूमा के निर्भर गर्दछ?
लगभग सबै मानिसहरूलाई हिउँ मन पर्छ। तर के हामी जान्दछौं कसरी हिमफ्लाक्सहरू गठन हुन्छन्, उनीहरूसँग भएका आकृतिहरू, र त्यहाँ बिभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्?
थर्मल सनसनी वा हामीमा भएको वास्तविक तापक्रम भन्दा फरक नहुन सक्छ। के हामीलाई थाहा छ हावा चिस भनेको के हो र मौसमविद्हरूले यसलाई कसरी गणना गर्छन्?
बैकल ताल किन यति प्रसिद्ध छ?
बैकल ताल विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध ताल हो। के तपाई यस कारणले जान्न चाहानुहुन्छ किन यती महत्त्वपूर्ण छ र यो कत्ति अविश्वसनीय हुन सक्छ?
के तपाईंलाई ग्रीन हाउस प्रभावको भूमिका थाहा छ, यो कसरी हुन्छ र यसले ग्रहमा कस्तो प्रभाव पार्छ? तपाइँ सबै यहाँ जान्न आवश्यक छ।
आश्चर्यजनक भिडियोले विगत १ 15 बर्षका सबै भूकम्पहरू देखाउँदछ
पछिल्ला दुई दशकहरूमा मानिस सबैभन्दा दुःखद समयबाट गुज्रिरहेको छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईं २००१ देखि भैंचालोहरू देख्ने भिडियो देख्नुहुनेछ।
बायोम भनेको के हो?
बायोम भनेको के हो? यी भौगोलिक क्षेत्रहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसमा हामी जनावरहरू र वनस्पतिहरूको समूह भेट्टाउँछौं जुन अनुकूलताको क्षमताको कारणले त्यहाँ हुन सक्छ।
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि पशुपालनले वातावरणलाई कसरी असर गर्छ? यदि हो भने आउनुहोस् र हामी यो चाखलाग्दो प्रश्नको उत्तर दिनेछौं।
लिथोस्फियर पृथ्वीको क्रस्ट र पृथ्वीको बाहिरी मन्टलले बनेको छ। यो पृथ्वीको चार उपप्रणाली मध्ये एक हिस्सा हो।
हिउँदको संक्रान्तिमा यो उत्तरी गोलार्द्धको सब भन्दा छोटो दिन र सबैभन्दा लामो रात हो र यसको विपरित दक्षिणी गोलार्द्धमा।
चट्या fromबाट तपाईं कहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ?
किरणलाई "आकर्षित" गर्न र ध्यान नलगाउन सक्षम हुन केही आधारभूत सल्लाहहरू यस अवस्थामा हामी नायक हुन चाहँदैनौं।
मौसम परिवर्तनलाई रोक्न फेरि ग्रहलाई हरियो बनाउँदैछ
जैवविविधता कायम राख्नु र खाना चेन र जैविक चक्रलाई तोड्नु जलवायु परिवर्तन विरूद्ध लड्न राम्रो हतियार हो।
ध्रुव तारा किन सधैं आकाशमा स्थिर गरिन्छ?
हामी वर्णन गर्दछ किन उत्तर तारा सँधै आकाशमा स्थिर गरिन्छ जबकि बाँकी पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ। तपाईं कसरी पोलारिस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ?
स्पेनको हावाहरू: ट्रामोन्टाना, लेभान्ते र पोनिटे
स्पेनका तीन सबैभन्दा चल्ती हावाहरूको मुख्य विशेषताहरूको समीक्षा: ट्रामान्टाना, लेभान्ते र पोनिटे। यो किन हावा हो?
युरोपमा पानीको गुणस्तर सोचेभन्दा पनि खराब छ
वाटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिभले २०१ 2015 सम्ममा युरोपेली संघलाई ताजा पानीको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। आज यो उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन, जल निकायहरूमा विषाक्त स्तर अत्यन्तै उच्च छ।
एन्थ्रोपोसीन, के मानिस आफ्नो भूगर्भीय युगको "योग्य" छ?
मानवजातिले ग्रह र यसको वातावरणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ जसले विलुप्त पार्छ र प्राकृतिक र मौसम चक्रमा परिवर्तन ल्याउन यसले विश्वको भौगोलिक स्तरमा तथाकथित एन्थ्रोपोसीन थप्न पनि अध्ययन गर्न सम्भव तुल्याउँछ।
वर्षा वर्षा जस्तो के आकारको हुन्छ?
नासा वैज्ञानिकहरूको अनुसार, वर्षावहरु आँसुको जस्तो आकारको हुँदैन, तर ह्यामबर्गर बन जस्तो छ।
शीतकालीन ओलम्पिक खेलहरू। के तपाईको निरन्तरता खतरामा छ?
विगत शताब्दीमा शीतकालीन ओलम्पिक आयोजना गरिसकेका केवल छ शहरहरू मात्र उनीहरूको आयोजना गर्न कडा हुन्थे। सबैभन्दा पुराणमतवादी हावापानी अनुमानको लागि पनि हिउँद ओलम्पिक आयोजना गरेका १ cities शहरहरूमध्ये ११ जनाले आगामी दशकहरूमा इन्टरब्रुक (अष्ट्रिया) मा इन्टरब्रुक (अस्ट्रिया) मा प्रबन्धक केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा आउन थालेको छ।
सबैभन्दा कम तापक्रम पृथ्वीमा रेकर्ड गरियो
ग्रहको सतहमा चिसो ठाउँ पूर्वी अन्टार्कटिक पठारको अन्टार्कटिक पर्वत श्रृंखलामा अवस्थित छ जहाँ स्पष्ट शीतकालीन रातमा तापक्रम शून्यभन्दा º २º सेन्टिग्रेड तल पुग्न सक्दछ।
स्पेनको हावाहरू: सिरोको, लेबेचे र सिएर्जो
स्पेनका तीन सबैभन्दा प्रसिद्ध बतासहरूको मुख्य विशेषताहरूको समीक्षा: सिरोको, लेबेचे र सिएरजो।